fancy ngamaplanga nazo - China Weifang Joy Sea Trade
1. Ifenitshala: ifenitshala ipleyiti, ophilileyo ifenitshala igumbi, ifenitshala lokulala, ifenitshala ukufunda, ifenitshala zabantwana, ifenitshala ikhitshi
2. Iitafile kunye nezitulo: idesika, iitafile zabafundi kunye nezitulo, iidesika, idesika, idesika, itheyibhile nkomfa, idesika ikhompyutha
3. iindidi zokuhombisa : umhombiso elingaphakathi, apho kungazotywa imifanekiso ngaphakathi, picture izakhelo, iifoto zobugcisa, landscape zokuhombisa painting
4. iindidi Ofisi: iitheyibhile zabasebenzi, nekhabhathi ikhompyutha, idesika ngaphambili, inkampani iibhodi endlwini
5. iingcango ezinokususwa: umnyango tyaba, ibhodi indawo
6. Ezinye iindidi: umboniso ifanitshala, ifenitshala evenkileni counter, evenkileni eevenkile ngodonga, yezandla
kwemifanekiso Weifang Joysea Trade Co., Ltd
imveliso Fancy buKristu ngamaplanga
izinto Main ezisemanzi zepampiri, WBP glue
intlawulo TT, L / C kwi emehlweni, ngenxa umxhasi rhoqo, kufuneka imigaqo intlawulo ngcono.
ngamaplangaiye yaba yenye imveliso eyaziwa kakhulu kwaye wathembela zokwakha iinkuni eminyaka. Ezenziwa zizixwexwe of ngokwenene cross-elaminethiweyo nemali phantsi nobushushu kunye noxinzelelo kunye yokuncamathelisa nkqi, iiphaneli ngamaplanga nozinzo ophezulu mbini kunye esemagqabini amandla-to-ubunzima ratio kwaye abanganyangekiyo kakhulu iimpembelelo, imichiza, kunye notshintsho lobushushu yokusingqongileyo nokufuma .
1.Your yophando ezinxulumene nemveliso yethu & xabiso ziya waphendula ngaphakathi 24hours.
inkqubo yolawulo lomgangatho 4.Detailed.
Imiba kushishino lwemveliso 6.Provide for free, iingcebiso iimveliso kunye nezisombululo ngokwendlela besimo abaxumi '.
10.We Ukubonelela ngeenkonzo simahla eTshayina ukuya abathengi ixesha elide, ezifana iihotele nkundla, abakhokeli, uncedo ukuthenga, ukuhlola ulwazi nezinye iinkampani, bejonge nabathengisi umgangatho nezinye iimveliso.
1, Yintoni na MOQ wenu?
MOQ yethu ngokuqhelekileyo isikhongozeli 20ft okanye inkonkxa 40ft
2, Yintoni na ixesha wophathelo?
Ixesha lonikezelo idla ngaphakathi 15days emva kokuba ufumene imali yakho.
3, uyilo Customer kunye logo ekhoyo?
Ewe, uyilo yomthengi kunye logo wamkelekile kwaye luyafumaneka.
4, Yintoni na imveliso zakho eziphambili?
5, Yenza iisampulu ziyafumaneka?
Ewe, isampuli okhululekileyo intlawulo yokuthutha kuya kuqokelelwa ecaleni kwakho. Kwaye emva kokuba umyalelo kuqinisekisiwe, le itshaja nto asuswayo kwintlawulo yonke.
Previous: ngamaplanga yorhwebo
Next: HPL elaminethiweyo ngamaplanga USA / 1220x2440mm formica HPL Laminate Sheets
1 Inch ngamaplanga
18mm Marine ngamaplanga
Anti-zelanga Film Ejongene ngamaplanga
Black Film nazo ngamaplanga
Brown Film nazo ngamaplanga
iKhabhinethi Grade ngamaplanga
Combi Core ngamaplanga
Commercial irabha Wood ngamaplanga
eziphathekayo Formwork Film ejongene ngamaplanga
Construction Marine ngamaplanga
yangaphandle Grade ngamaplanga
yangaphandle I ngamaplanga
Fancy nazo ngamaplanga
Film ucwecwe Camera
Film bebone ucwecwe 18mm
Hpl ethile Laminates ngamaplanga
Hpl Laminate ngamaplanga
Hpl elaminethiweyo ngamaplanga
Marine Grade ngamaplanga
Melamine nazo ngamaplanga
Mixed ucwecwe Core
ucwecwe Plastic Camera
ucwecwe ngokuba Construction
ucwecwe Kuba Sale
Ubungakanani ucwecwe Sheet
Ingcinezelo ezinyangiweyo ngamaplanga
Red Film wabhekana ngamaplanga
Standard ucwecwe Size
Types Of ngamaplanga